Isdilka Manganese, MnSi - Goodao Technology Co., Ltd.
Ku milma hydrofluoric acid, alkali, aan lagu daadin karin biyaha, nitric acid, sulfuric acid.Manganese silicide waa nooc ka mid ah silicide birta kala guurka ah, taas oo ah nooc ka mid ah iskudhafka isdhexgalka.
Magaca Ingiriisiga: Naafada Manganiska
Caanaha kiimikada mnsi2
Miisaanka molikalku waa 111.11
1. Dabeecad: crystal octahedral grey.
2. Cufnaanta (g / ml, 25 ℃): 5.24.
Ku milma hydrofluoric acid, alkali, aan lagu milmin biyaha, nitric acid, sulfuric acid.
Dilalka loo yaqaan 'Manganese silicide' waa nooc silsilad bir ah oo kala-guur ah, taas oo ah nooc ka mid ah isku-darka iskudhafan ee isku-dhafan. Sababtoo ah sifooyinka gaarka ah ee jirka iyo kiimikada, waxaa si guul leh loogu adeegsaday aaladaha isku dhafan ee birta oksijiin ee qalabka semiconductor, daboolka filimka khafiifka ah, modules qaab dhismeedka badan, walxaha korantada, qalabka heerkulka korantada iyo walxaha sawir qaadeyaasha. Qalabka nano waxay muujinayaan astaamo gaar ah oo koronto, muraayadaha indhaha, magnetic iyo thermoelectric, iyo xitaa waxay leeyihiin qiime codsi macquul ah oo ku saabsan berrinka catalysis. Adoo u adeegsanaya silgan manganese sida sheyga beddelashada kuleylka korontada, aaladda awoodda soo saaridda awoodda waa 2.4mw / k2m, taas oo qiyaastii ah 2 jeer asalka. Adeegsiga agabyada, waxaa lafilayaa inay garwaaqsato moduleka dhaliya korantada tamarta korontada kuleylka badan leh taasoo u rogi karta tamarta kuleylka aan la isticmaalin ee 300 ~ 700 ℃ mashiinka iyo foornada warshadaha oo koronto laga dhigo. Si kastaba ha noqotee, hababka diyaarinta dhaqameed sida metallology ama hababka jireed ma buuxin karaan shuruudaha diyaarinta nanomaterials silig biraha kala guurka ah.
Si kastaba ha noqotee, isdifaaca manganese ee ay diyaarisay Haixin wuxuu leeyahay shahaadada sare ee alxanka, habka biraha saafiga ah, daahirnimo sare iyo waxyaabaha majaladaha ka hooseeya. taas oo u dhiganta qiyaastii 2 jeer asalka tusmada korantada asalka iyadoo la adeegsanayo walxaha manganese siliciska qalabka is-beddelka heerkulka korantada. Iyadoo la adeegsanayo qalab, waxaa la filayaa inay ogaato korantada korantada dhalisa korantada korontada dhalisa taas oo u beddeli karta tamarta kuleylka aan la isticmaalin ee 300 ~ 700 ℃ mashiinka iyo foornada warshadaha oo loo beddelo koronto Hangi silgan manganese (mnsi1.7) wuxuu ka kooban yahay ele badan
Hore: Dilka Ferro, FeSi2
Xiga: is-dilidda vanadium, VSi2
Budada siligga Manganese
Warshadaha budada siliga ah ee Manganese
Warshad budada siliga ah ee Manganese
Soo-saaraha budada siligga Manganese
Soosaarayaasha budada siligga Manganese
Budada siligga Manganese Qiimaha
Xigashooyinka budada siliga ah ee Manganese